आँखाले कसरी देख्छ ? चस्मा लगाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनैपर्छ « Asia Sanchar : Nepal News Live
आँखाले कसरी देख्छ ? चस्मा लगाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनैपर्छ
एकदमै अँध्यारोमा हामी कुनै वस्तुलाई पनि देख्न सक्दैनौँ, किनकि कुनै चिज वा वस्तु देख्नका लागि प्रकाश चाहिन्छ । कुनै पनि वस्तुबाट परार्वतन भई आएका प्रकाशका किरणहरू हाम्रा आँखाका पारदर्शक भागका माध्यमले संकलित रूपमा केन्द्रीकृत (फोकस) भई हाम्रो आँखाको दृष्टि पर्दामा पुगी सो वस्तुको आकृति बन्दछ । दृष्टिपर्दामा भएका स्नायुहरूले यसरी आएका प्रकाशका किरणबाट बनेको आकृतिलाई दिमागसम्म पुर्याउने काम गर्दछन् र दिमागले त्यसलाई बुझेपछि हामीले उक्त वस्तुहरू देख्दछौँ ।
आँखाको गेडीको बनावट सामान्यभन्दा ठूलो भएमा वा प्रकाशका किरणहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने आँखाको पारदर्शक भागको क्षमता सामान्यभन्दा बढी भई प्रकाशका किरणहरू दृष्टिपर्दाभन्दा अगावै केन्द्रीकृत हुने अवस्थालाई अदूरदृष्टि भनिन्छ । यो अवस्थामा टाढाका चिजहरू प्रस्ट देखिने हुन्छ । आँखाको आकार सामान्यभन्दा ठूलो भएमा वा प्रकाशका किरणहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने आँखाको क्षमता सामान्यभन्दा बढी भएमा अदूरदृष्टि हुने गर्दछ ।
अदूरदृष्टि भएको विद्यार्थीले कक्षाकोठामा सेतो वा कालोपाटीमा लेखेको कुरा देख्न नसक्ने हुँदा पठन–पाठनमा कमजोर वा पछाडि पर्ने हुन्छन् । यसैगरी, अन्य व्यक्तिले टाढाको वस्तु देख्न नसक्ने भई उनीहरूको दैनिक कामकाजमा बाधा पुग्न जान्छ। दूरदृष्टि भएको अवस्थामा नजिक हेर्न गाह्रो हुने हुँदा चस्मा नलगाईकन धेरैबेरसम्म पढ्ने तथा नजिकको काम गर्ने गरेमा आँखालाई बढी परिश्रम पर्ने हुन्छ । यस्तो भएमा आँखा थाक्ने तथा टाउको दुख्ने, पढ्दा अक्षरहरू तथा हरफरहरू चल्ने हुन्छ । तसर्थ, यस्ता अवस्थामा चस्मा लगाएमा विद्यार्थीको पठन–पाठनमा र अन्य व्यक्तिको दैनिक कमकाजमा बाधा पर्न पाउँदैन।
चस्मा नलगाएर चस्माको नम्बर बढ्दैन । साधारणतया केटाकेटीमा अदूरदृष्टि भएको खण्डमा २० वर्ष उमेरसम्म उनीहरूको चस्माको नम्बर बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ भने दूरदृष्टि भएको खण्डमा उक्त चस्माको नम्बर घट्दै जाने हुन्छ । चस्माको प्रयोगले धुलो, कसिंगर आदि आँखामा पर्नबाट समेत बचाउँछ ।